Gaasaska ku jira Bisadaha: Sababaha iyo Xalka | Bisadaha Noti
Maria Jose Roldan | | Cudurada, Tricks
ka gaaska bisadaha Caadi ahaan waa dhibaato aanaan siinaynin ahmiyad weyn ilaa ay ka bilaabmaan inay ur badan yeeshaan. Badanaa waa qayb dabiici ah oo ka mid ah habka dheef-shiidka, laakiin markii astaamo kale dhacaan, caafimaadka dhogorta ayaa u badnaan doona inuu u baahdo feejignaan.
Aynu aragno waa maxay sababaha, astaamaha iyo xalka gaasaska ku jira bisadaha.
1 Sababaha gaaska ee bisadaha
2 Calaamadaha gaaska ee bisadaha
3 Daawooyinka guriga ee gaaska bisadaha ku jira
3.1 Iska ilaali inaad siiso caano
3.2 Waxaad siisaa cunno ay ku yartahay fiber iyo badarka
4 Daawooyin badan oo lagu daaweeyo gaaska bisadaha ku jira
5 Ma dhibaato caafimaad baa?
6 Goorma ayaa loo tagayaa dhakhtarka xoolaha?
Sababaha gaaska ee bisadaha
Inta badan gaasasku waxay ka yimaadaan hawo qaadashada, sidaa darteed waxyaabaha ugu waaweyn ee keena waa bisadda dhaqso u cunama maxaa yeelay wuxuu la tartamaa bisad kale inuu helo ama xitaa diiqada (macluumaad dheeri ah Halkan). Sababta kale waxay tahay inaad bilowdid cunista isla markaad orod sameysay iyo jimicsi in mudo ah. Laakiin iyagu maahan sababaha keliya.
Cunto sarreenku ku badan yahay, hadhuudhka ama waxyaabaha la soo saaray waxay sababi karaan gaas saa'id ah. Marka la eego, waa in la sheegaa in bisaduhu yihiin hilib cunno, iyo habka dheef-shiidkaaga si fiican uma dheefshiidi karo cuntooyinkan. Sidoo kale, haddii la siiyo caano ama waxyaabaha caanaha laga sameeyo, waxay sidoo kale ku dambayn karaan gaas. Iyo, jidka, waa inaad iska ilaalisaa inaad ku dhowaato qashinka, maxaa yeelay waxay cuni kartaa cunno xun oo waxay kaa dhigeysaa mid xun. Sidoo kale waa inaad cadayato maalin kasta, haddii kale waxaad ku dhici lahayd halista ah inay sameysmaan kubadaha timaha, natiijadaasna, waxaad yeelan kartaa gaas.
ka dulinka mindhicirka iyo cudurada caloosha waxay sidoo kale sabab u noqon karaan bisadda dhibaatadan haysata.
Calaamadaha gaaska ee bisadaha
Gaaska xiidmaha 99% waa udgoon, sidaa darteed ogaanshaha haddii bisadeena ay leedahay dhibaatooyin dheefshiidka marwalba ma sahlana. Laakiin ha ka welwelin, Waa tan liiska calaamadaha ugu badan:
Sawaxanka mareenka caloosha iyo caloosha
Daawooyinka guriga ee gaaska bisadaha ku jira
Haddii gaaska bisadu dhibaato noqotay, gaar ahaan haddii aad ka shakisan tahay inuu cudur leeyahay, waa inaad u gee dhakhtarka xoolaha si aad u baarto. Laakiin guriga waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa dhowr waxyaalood, sida kuwa soo socda:
Iska ilaali inaad siiso caano
Caanaha lo'da ayaa leh laaktoos, taas oo ah sonkor aysan bisaduhu dheef shiidi karin maxaa yeelay ma soo saaraan maadada loo yaqaan 'enzyme' loo baahan yahay, lactase. Waa inaad iska ilaalisaa inaad siiso caano iyo waxyaabaha kale ee caanaha laga soo saaro ee asalkoodu yahay xoolaha, marka laga reebo kuwa aan lahayn laktoos.
Waxaad siisaa cunno ay ku yartahay fiber iyo badarka
Cunnooyinka bisadaha badankood waxaa ku badan faybar iyo badarka, in kasta oo ay yihiin ilo laga helo borotiinka, xayawaanadan si fiican uma dheefshiidi karaan. Si looga hortago bisaddaada inay gaas hesho, Waxaa lagugula talinayaa inaad siiso quudin hodan ku ah borotiinka asal ahaan ka soo jeeda xoolaha iyo saboolka iyo badarka.
Daawooyin badan oo lagu daaweeyo gaaska bisadaha ku jira
Waxyaabaha kor ku xusan ka sokow, waxaan kuu sheegi doonaa dawooyinka kale ee iyagana wanaagsan inaad ogaato ... habkan waxaad ku ogaan doontaa sida looga caawiyo bisaddaada inaysan gaas ku dhicin (maadaama ay qaarkood xanuun badan ku noqon karaan qaarkood) kiisaska).
Dhinaca kale, waa fikrad fiican inaad ku qorto waxa ay bisadaadu cunayso 24 saac gudahood iyada oo ujeedadu tahay in la sameeyo dabagal wanaagsan oo markaa la ogaado waxa ay yihiin cuntooyinka sababi kara gaasaskan.
Intaas waxaa sii dheer, si aad uga caawiso bisaddaada inay baabiiso gaasaskan, waa fikrad fiican inaad tixgeliso waxyaabaha soo socda:
U beddel cuntadaada si joogto ah mid ay ku yar tahay fiber-ka oo ay leeyihiin cuntooyin si fudud loo shiidi karo. Dhakhtarkaaga xoolaha ayaa kugula talin kara waxa ugu fiican ee loo yaqaan 'feline'.
Cunto bisadahaaga cunto yaryar laakiin badanaa badanaa maalintii.
Haddii aad guriga ku haysatid wax ka badan hal bisad, markaa waa inaad si gooni ah u quudisaa si looga ilaaliyo inay ku dagaallamaan cuntada.
Ka hor tag bisaddaada cunista cuntada dhacay (tusaale ahaan, kan qashinka ku jira).
Waa inaad taas hubisaa jimicsigaaga bisadda si joogto ah.
Haddii aad u maleyneyso in gaasasku ay aad ugu daran yihiin jirkaaga, markaa waa inaad la hadashaa dhakhtarka xoolaha inuu kaaala taliyo daawada ku habboon bisadaha taasina waxay kaa caawin kartaa inaad si wanaagsan u cayriso gaaska.
Waxaa jira xalka qaar ka mid ah dhibaatooyinka gaaska ee bisadaha, tusaale ahaan:
Kaabisyada enzyme ee Pancreatic
Weligaa ha siin bisaddaada wax dawo gaas ah ama xal ah adiga oo aan marka hore kala hadlin dhakhtarkaaga xoolaha., xitaa haddii aad u maleyneyso inay yihiin daaweyn dabiici ah oo aysan adiga waxyeello kuu geysan doonin. Xirfadlaha waa inuu qiimeeyo dhowr arrimood oo muhiim ah sida nooca, da'da ama culeyska xayawaankaaga.
Ma dhibaato caafimaad baa?
Milkiileyaal badan oo ka mid ah bisadaha gaaska leh, aad ayey uga walwalaan maxaa yeelay waxay u maleynayaan in gaaska dhibta leh uu u noqon karo dhibaato caafimaad oo daran. Dhab ahaan, gaaska isdaba-joogga ahi maahan inuu noqdo wax xun, laakiin markay xad dhaaf noqoto waxaad markaa u baahan tahay daryeel caafimaad maxaa yeelay waxay noqoneysaa dhibaato ka daran sidii markii hore loo maleynayay. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka laga yaabo inaad la il daran tahay.
Cudurka mindhicirka caloosha
Dulinka (macluumaad dheeraad ah)
Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii aad u maleyneyso in bisaddaada laga yaabo inay la soo daristo wax xanuun ah, ha ahaato kuwa aan soo sheegnay ama kuwa kale, waxaa aad muhiim u ah inaad u tagto dhakhtarka xoolaha si aad u sameyso baaritaannada ku habboon. Sidan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad si sax ah u ogaato waxa ku dhacaya bisaddaada oo aad markaa u hesho daaweynta ku habboon isaga.
Sidaan kor kuugu soo sheegnay, waa muhiim inaad tagto dhakhtarka xoolaha markasta oo aad u maleyso in bisadaadu ay leedahay nooc xanuun ah, laakiin si kastaba xaalku ha ahaadee, waxaa muhiim ah in la arko xirfadle haddii ay dhacaan gaasas iyo astaamahan qaarkood, maxaa yeelay waxay tilmaami kartaa dhibaato caafimaad oo daran:
Uu xanuun ku hayo caloosha markaad taabato
Uu leeyahay calool bararsan
Saxaradaada dhiig baa kujira
Ugu dambeyntii, iyo tallaabo ka hortag ah, aad ayey muhiim u tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid meesha xayawaankaaga xayawaanku ka heli karo cuntada. Tusaale ahaan, guriga, marwalba si ammaan ah u dabool qashinka oo ha u oggolaan in xayawaankaagu dhex mushaaxaan ama uusan aadin dabaqyada deriska ah, hana u oggolaan inuu ku dhex wareego meelaha qashinka lagu keydiyo.
Sidoo kale, haddii xayawaankaaga xayawaanku cuno saxaro (midkiisa iyo tan xayawaannada kaleba) maxaa yeelay nafaqo-xumo ayaa ku haysa cuntadiisa, waa inaad daaweyso oo aad kala hadasho dhakhtarka xoolaha waxa dhacaya.
Gaaska ku jira bisaduhu wuxuu noqon karaa dhibaato aan raaxo lahayn, laakiin khiyaanooyinkan waxaad xaqiiqdii awoodi doontaa inaad ku xalliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cudurada » Gaasaska ku jira bisadaha: sababaha iyo xalka
Bisadeeydu waxay leedahay calool gaasas ka buuxdo laakiin ma cunta oo waa caato iyo hoos, taas oo aan ku siin karo inay dibiro yeelato waayo waxay u eg tahay durbaan
Jawaab Lissette ivonne castillo zambrano
Waa salaaman tahay Lissette.
Waan ka xumahay in bisadaadu xun tahay, laakiin kuma caawin karo maxaa yeelay ma ihi dhakhtar xoolaha.
Waxaan kugula talinayaa inaad u qaadatid xirfadle.
Labadaydu waa 10 maalmood, hooyadiis waa ka tagtay, waan korinayaa, laakiin caanaha oo dhan waxay bararayaan calooshiisa wuxuuna leeyahay calool iyo gaas badan, maxaan sameeyaa?
Waxaan kugula talinayaa inaad u kaxeyso dhakhtarka xoolaha (anigu ma ihi).
Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale dirxi leedahay Da'daan aad bay u nugul yihiin.
Waa maxay astaamaha iyo daaweynta cagaarshow ee bisadaha?